Serivisy fanoratana vy - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Ny fanoratana vy vita amin'ny vy vita amin'ny Anebon dia misy famohana totohondry, fanondrahana, famelarana, fametahana embossing ary asa hafa. Ny dingana tsirairay dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fitaovana noforonina CAD / CAM izay afaka manome ny fepetra takiana amin'ny faritra sarotra. Ny fanitsiana metaly takelaka dia fomba haingana sy mahomby hamokarana faritra maharitra sy avo lenta ho an'ny fitaovana, aerospace, fitsaboana, elektronika, indostria, jiro ary indostria hafa. Hampiasa ny fitaovana mandroso sy ny ekipa efa za-draharaha izahay hanamboarana ireo vokatra noeritreretinao, ary mino izahay fa afaka mifanaraka amin'ny filanao sy ny vidiny ary ny kalitaony izahay.
Afaka manolotra ireto safidy famokarana manaraka ireto izahay:
Singa voasintona lalina
Ireo singa voangona
Fitrandrahana, fanoratana ary famerenana amin'ny laoniny
Fametahana tarehimarika sy vinavina
CO2 welding - manual sy robotic
Na dia azo ovaina aza izy io mba hanamboarana faritra manokana, matetika ny fanitsakitsahana vy anay dia manaraka ny dingana dimy ihany:
Famerenana endrika:Ireo injenieranay dia handinika ny famolavolana ampahany amin'ny antsipiriany mba hahazoana antoka fa mety amin'ny nohomboana vy. Anisan'izany ny famakafakana lalindalina ny refin'ny ampahany, ny fitaovana, ny tahan'ny refy ary ny fandeferana ilaina.
Safidy fanaovan-gazety: Ireo injenieranay dia hamaritra ny haben'ny milina mety indrindra sy ny savaivony ho an'ny haben'ny ampahany sy ny fitaovana.
3D Virtual Prototype:mampiasa rindrambaiko virtoaly hamoronana prototypes an'ny faritra. Alohan'ny hanombohan'ny fizotry ny famokarana, ny prototype dia mihazakazaka amin'ny alàlan'ny simika fandidiana maro be mba hahitana olana amin'ny famolavolana.
Fitaovana fananganana: Ireo injenierantsika mahay dia manamarina ny habeny sy ny takiana amin'ireo singa ary manamboatra fitaovana.
Process:Apetraho eo amin'ny bobongolo ny takela-by na ny metaly ary amboary. Avy eo ampandehanana ny milina fanaovan-gazety ary manomboka miasa amin'ny hery sutable. Avereno ny fizotrany mandra-pahatongan'ny singa ao amin'ilay habe sy endrika tiana.
Ny famolavolana sy ny fanamboarana ny fivoarana sy ny fitaovana marina dia ao anatin'ny fampanantenna hanome vahaolana famokarana tanteraka ho an'ny famokarana singa metaly voatsindry.
Androany, mampiasa ny fahaizanay ao an-trano izahay hanomezana tolotra bobongolo tena lafo vidy.
Azontsika atao ny mamadika ny famolavolana ny vokatra na ny sary momba ny injenieran'i CAD hamokatra fitaovana milina afaka mamokatra ny vokatrao. Ny fitaovana bobongolo dia maharitra sy azo antoka, miaraka amin'ny androm-piainana lava, noho izany ny vidiny dia azo raisina ho fampiasam-bola.
Ho anao ny fitaovana bobongolo, fa azonay atao ny mitazona, manamboatra ary manamboatra rehefa ilaina izany.
Amin'ny maha magazay tanteraka sy fivarotana maty anay, dia mahay amin'ny sehatry ny famoronana rehetra isika, anisan'izany ny laser laser, totohondry CNC, famoritana CNC, famolavolana CNC, fametahana, fametahana milina, fametahana fitaovana ary fivondronambe.
Manaiky akora manta amin'ny takelaka, lovia, bara na fantsona izahay ary za-draharaha amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo fitaovana isan-karazany toy ny aliminioma, varahina, vy vy ary vy vy. Ny serivisy hafa dia misy fampidirana fitaovana, welding, fikosoham-bary, fametahana milina, fihodinana ary fivoriambe. Rehefa mihabetsaka ny volanao dia manana safidy koa ianao amin'ny fampitaovana mafy ny faritra hampiasanao amin'ny departemantan'ny vy. Ny safidy fanaraha-maso dia manomboka amin'ny fanamarinana endri-javatra tsotra hatrany amin'ny FAIR & PPAP.